ယုံကြည်သူများ မဖြစ်မနေ ဖတ်ရှုရမည်- စုဝေးပွဲတက်ရောက်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်ဟု အဘယ်ကြောင့်ဆိုရသနည်း
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ အခန်းကြီး ၁၀ အငယ်၂၅တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်မှာ “လူအချို့တို့၏ ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း၊ အချင်းချင်း စည်းဝေးခြင်းအမှုကို မရှောင်မလွှဲကြနှင့်။ အချင်းချင်းတို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့။ ကာလအချိန် ရောက်လုနီးသည်ကို ထောက်သဖြင့်၊ သာ၍ ကြိုးစားကြလော့။” ယုံကြည်သူများ အနေနှင့် စုဝေးပွဲတက်ရောက်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီး သည့်အတွက် ယင်းကို မြဲမြံစွာ ထိန်းထားရမည်။ သို့သော် အချို့လူများသည် အလုပ်နှင့် မိသားစု အတွက် အလုပ်များကြပြီး စုဝေးပွဲကို ပုံမှန်တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ပို၍ ဝေးကွာသွားရသည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ အမှန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စုဝေးပွဲ၏ အရေးပါမှုကို မသိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် စုဝေးပွဲတက်ရောက်ခြင်း၏ အရေးပါမှုမှာ အဘယ်နည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများက စုဝေးပွဲတက်ရောက်ခြင်း၏ အရေးကြီးသော အချက်နှစ်ချက်ကို သင့်အား သိနားလည်စေမည် ဖြစ်သည်။
၁. စုဝေးပွဲကို အမြဲတက်ရောက်နိုင်မှသာ ဘုရားသခင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံရနိုင်သည်
စုဝေးပွဲ တက်ရောက်ခြင်း သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဝပ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌ အရေးကြီးသော လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး သိထားသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စုဝေးပွဲသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၏ နေရာဖြစ်သည့်အတွက် စုဝေးပွဲတွင် နှုတ်ကပတ်တော်ကို များများဖတ်မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားကို ပို၍ လျင်မြန်စွာ နားလည်လာနိုင်ပြီး ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် သတ်မှတ်ချက်တို့ကို နားလည်နိုင်မည်။ ထိုအခါမှသာလျှင် အမှုအရာများကို ကြုံတွေ့သည့်အခါ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အရ အစဉ်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။ ယုံကြည်မှု၌လည်း သမ္မာတရား၏ စစ်မှန်မှုထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ဘုရားသခင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို ရယူနိုင်မည်။ ထို့ကြောင့် စုဝေးပွဲ မှန်မှန်တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိမရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို ရနိုင်ခြင်းရှိမရှိ အတွက် အလွန်အရေးပါသည်။ စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသူ တစ်ယောက် သည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်သို့ မကြာခဏ ရောက်လာ၍ စုဝေးပွဲကို တက်ရောက်ပြီး နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပို၍ ဖတ်ရှုရမည်။ ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှုပ်ထွေးစွာ လိုက်လျှောက်နေပါက သို့မဟုတ် အလုပ်၊ မိသားစုအတွက် နှင့်သာ အလုပ်များနေပြီး မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ခြင်းကို အရေးမစိုက်ပါက၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို မဆိုထားနှင့်၊ ယင်းကို အစဉ် ဖတ်ရှုခြင်းလည်း မရှိပါက၊ ထိုကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို မည်သို့ ရရှိနိုင်မည်နည်း။
ဘုရားသခင် ပြောသည်မှာ- “ကုန်လွန်သွားသော နေ့ရက်တိုင်းနှင့် သင်လှမ်းသည့် ခြေလှမ်းတိုင်းဖြင့်၊ သင်၌ တစ်ရက်လျော့နည်းသွားပေ၏။ အချိန်သည် မည်သူကိုမျှ မစောင့်ပေ။ သင်သည် အစားအစာ၊ အဝတ်အစားများ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်အရာမဆိုထက်၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအား သင့်ဘဝတွင် အကြီးမားဆုံးသော အရာဖြစ် ချဉ်းကပ်မှသာ၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းမှ သင်သည် အကျိုးရရှိပေလိမ့်မည်။ သင်သည် အချိန်ရှိမှသာ ယုံကြည်ပြီး၊ သင်၏ ယုံကြည်ခြင်းအဖို့ သင်၏အာရုံအားလုံးကို မြှုပ်နှံနိုင်စွမ်း မရှိပါက၊ ပြီးလျှင် သင်သည် အစဉ် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွင် နစ်နေပါက၊ မည်သည့်အရာမျှ ရရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။”
ယင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်သည်မှာ ယုံကြည်သူ တစ်ယောက်အနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခြင်းအား ဦးစားပေးဖြစ်ရမည်။ ထို့သို့မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့၏ သဘောအတိုင်း ယုံကြည်နေလျှင် အဆုံးတွင် သုတ်သင် ဖယ်ရှားခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် စုဝေးပွဲတက်ရောက်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ သမ္မာတရားကို မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း တို့ ကဲ့သို့သော ဘုရားသခင်နှင့် ပုံမှန် ဆက်ဆံရေး ရှိခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သူ အယောက်စီတိုင်း လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်သင့်သော အရာ ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဖန်းဆင်းခံ တစ်ဦး အနေနှင့် ဖြည့်ဆည်းသင့်သော တာဝန်တစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်မျှ ဖြင့်သာ ဝန်ခံ၍ စိတ်ထဲ၌သာ ယုံကြည်နေမည်၊ ပြီးလျှင် ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းကို ဝိညာဉ်အား အာဟာရ ဖြည့်ပေးခြင်း အဖြစ် မှတ်ယူပြီး စုဝေးခြင်း၊ သမ္မာတရားအား မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ခြင်း ကို အရေးမထားပါက ယင်းသည် ဘုရားသခင် နှင့် သက်ဆိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တော်၏ အမြင်တွင် မယုံကြည်သောသူ အဖြစ် မှတ်ယူခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ မယုံကြည်သူ လူတို့သည် သမ္မာတရားကို မြတ်နိုးခြင်း မရှိ၊ စုဝေးခြင်း မရှိ၊ ဘုရားသခင်မှလာသော အသက်ကို လိုက်စားခြင်း မရှိဘဲ၊ ထိုအစား ငွေရှာခြင်း၊ မိမိ၏ ဇာတိပကတိကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းအား အဓိကထားကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ဘုရားသခင်သည်လည်း ၎င်းတို့အား မုချ လက်ခံမည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း စုဝေးပွဲတက်ခြင်းနှင့် ဝပ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ကို အရေးမထားဘဲ ဇာတိပကတိအတွက် အပင်ပန်းခံပြီး အလုပ်များနေလျှင်၊ ယင်းသည် မယုံကြည်သူနှင့် ဘာမျှ မကွာပေ။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်မှု ရှိနေလျှင်ပင် အဆုံးတွင် ဘုရားသခင်၏ လက်ခံခြင်းကို မရဘဲ သမ္မာတရား၊ အသက်ကို လည်း မရနိုင်ပါ။ ထိုအစား မယုံကြည်သူတို့နှင့် တူညီသော ရလဒ်ကို ရရှိပြီး ဘုရားသခင်၏ ရွံမုန်းခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် စုဝေးပွဲကို မှန်မှန် တက်ရောက်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိသည် သမ္မာတရားကို ရရှိပြီး ဘုရားသခင်၏ လက်ခံခြင်း ရှိမရှိ ဆိုသည်တို့ နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်နွှယ်နေသည်။
၂. စုဝေးပွဲ မှန်မှန် တက်ရောက်နိုင်မှသာ အသက်တာ ကြီးထွားနိုင်မည်
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ပတ်တော် ပြောသည်မှာ- “တဖန်ငါဆိုသည်ကား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ သင်တို့တွင် နှစ်ယောက်တို့သည် သဘောချင်းတူ၍ ဆုတောင်းလျှင်၊ တောင်းသမျှသောဆုတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ၏ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူလတံ့။ အကြောင်းမူကား၊ အကြင်အရပ်၌ လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည် ငါ၏နာမကိုထောက်၍ စည်းဝေးကြ၏၊ ထိုအရပ်၌ သူတို့အလယ်မှာ ငါရှိသည်။” （ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၈:၁၉-၂၀）
“သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင် အသုံးပြုခြင်းခံရသည့် လူအချို့၌သာ အလုပ်မလုပ်သည်သာမက၊ ထို့ထက်ပို၍ အသင်းတော်၌ အလုပ်လုပ်သည်။ သူသည် မည်သူ့အထဲ၌မဆို အလုပ်လုပ်နေနိုင်သည်။ သူသည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ သင့်အထဲမှာ အလုပ်လုပ်ကောင်း လုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ဤအမှုကို သင်တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ကာလအတွင်း၌ သူသည် အခြားလူတစ်ယောက်အထဲ၌ အလုပ်လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပြီး၊ ထိုအခြေအနေတွင် သင်မြန်မြန်လိုက်ရမည်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၏ အလင်းကို သင် ပို၍နီးကပ်စွာ လိုက်လေလေ၊ သင်၏အသက်တာ ပို၍ ကြီးထွားနိုင်လေလေ ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါစေ၊ သူ့အထဲ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အလုပ်လုပ်ပါက သင်လိုက်ရမည်။ သူတို့၏ အတွေ့အကြုံများကို သင့်အတွေ့အကြုံများမှတစ်ဆင့် ခံစားလော့၊ ထိုအခါ သင်သည် ပို၍ပင် အဆင့်မြင့်သော အရာများကို ရရှိလိမ့်မည်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ လူသားအတွက် စုံလင်ခြင်း၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး အသက်တာ ကြီးထွားသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။”
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မှ ကျွန်ုပ်တို့ မြင်နိုင်သည်မှာ အသင်းတော်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အမှုပြုသော နေရာ ဖြစ်သည်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အတူတကွ စုဝေး၍ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ပြီး မိတ်သဟာယ ဖွဲ့လျှင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အလုပ်လုပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာသည်လည်း တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာမည်။ အကြောင်းမှာ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အယောက်စီတိုင်း၏ အစွမ်းအစ၊ နေထိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နောက်ခံ အကြောင်းများ မတူညီသည့်အတွက် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို တွေ့ကြုံခြင်း၌ လည်း မတူကြပါ။ ထို့နောက် အယောက်တိုင်းသည် နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် နားလည် သဘောပေါက်မှုလည်း မတူကြပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမတို့ အတူတကွ စုဝေးပြီး မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ခြင်းဖြင့် အချင်းချင်းသည် သူ့အားသာချက်ဖြင့် ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို ထေမိစေပြီး အလင်း ပိုမို ရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုစဉ် နားမလည်သော အရာ တစ်စုံတစ်ခု ရှိပါက သို့မဟုတ် ဘဝ၌ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့လာပါက အားလုံးတို့သည် စိတ်တူကိုယ်တူ ဘုရားထံ ဆုတောင်း၍ သမ္မာတရားကို အတူတကွ ရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းပါက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ အကြား၌ အမှုပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သော လမ်းကြောင်းကို ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ ဦးဆောင်ပြီး ဤနည်းအားဖြင့် အသက်တာ၌ ကြီးထွားခြင်းသည် ပိုမို လျင်မြန်နိုင်မည်။
ယင်းမှတစ်ဆင့် စုဝေးပွဲတက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာ ကြီးထွားခြင်း၌ တစ်ခုတည်းသော အရေးပါသည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ပင် အလုပ်များနေပါစေ၊ စုဝေးပွဲ တက်ရောက်ဖို့ အချိန်ပေးရမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စုဝေးပွဲ မှန်မှန် တက်ရောက်ခြင်း မရှိပါက သို့မဟုတ် သမ္မာတရားကို မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းနှင့် ရှာဖွေခြင်း၌ ညီအစ်ကို မောင်နှမတို့နှင့် အတူ မရှိပဲ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် အားကိုးပြီး ဆုတောင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုခြင်း၌ ဝတ်ကျေတမ်းကျေသာ ပြုပါက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အမှုကို ရနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ အသက်တာကြီးထွားမှု သည်လည်း ရပ်တန့်နေလိမ့်မည်။
စုဝေးပွဲ၏ အရေးပါမှုကို အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက် နှစ်ချက်မှ တစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ သိနားလည်ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ငွေကြေး၊ ကျော်ကြားမှု၊ အကျိုးအမြတ် နှင့် ဂုဏ်အဆင့်အတန်းနောက် လိုက်ခြင်း အစရှိသည်တို့သည် စာတန်၏ စမ်းသပ်မှု ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိထားသင့်သည်။ စာတန်၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကို ခံရပြီးနောက် “လူသားသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝရန် မည်သည့်အရာကိုမဆို လုပ်လိမ့်မည်”၊ “ငန်းတစ်ကောင်သည် ၎င်းပျံသန်းသည့်နေရာတိုင်းတွင် အော်မြည်သကဲ့သို့ လူတစ်ဦးသည်လည်း ရောက်ရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင် သူ့အမည်ကို ချန်ထားခဲ့၏”၊ “ငွေသည် အဓိကမဟုတ်သော်လည်း၊ ငွေမရှိလျှင် ဘာမျှလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်” စသည်တို့ ကဲ့သို့သော စာတန်၏ အဆိတ်အတောက်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းထဲသို့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်ထားသည့် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ငွေးကြေး၊ ကျော်ကြားမှု၊ အမြတ်အစွန်း နှင့် ဂုဏ်အဆင့်အတန်းကို လိုက်စားစေသည်။ ငွေကြေး၊ ကျော်ကြားမှုနှင့် အကျိုးအမြတ်တို့ အတွက် မည်သည့် အဖိုးအခကို မဆို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးနိုင်သည်။ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလိုဆန္ဒကို အသုံးပြုပြီး ငွေးကြေး၊ ကျော်ကြားမှု၊ အကျိုးအမြတ်နှင့် ဇာတိကပတိ၏ ချုပ်နှောင်မှု မှတစ်ဆင့် ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြား ဆက်ဆံရေးကို ချိုးဖျက်လေ့ရှိသည်။ ဤသို့ဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးသည်ထက် ဝေးသွားပြီး ကိုယ်တော့်ကို သစ္စာဖောက်သွားသည်အထိ အဆုံး၌ စာတန်၏ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုကို ခံခဲ့ရသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်၏ လှည့်ကွက်များကို ထိုးထွင်း သိမြင်နိုင်မှု မရှိဘဲ၊ နေ့တိုင်းလိုလို ငွေရှာခြင်း၊ မိသားစုအတွက်နှင့် လူမှုရေးကိစ္စ၌ အလုပ်များနေပြီး စုဝေးခြင်းကို အရေးမထားပါက ယင်းသည် စာတန်၏ အုပ်စိုးမှုအောက်၌ အသက်ရှင်နေခြင်း ဖြစ်၍ စိတ်ဝိညာဉ်အတွင်း၌ ပို၍ မှောင်မိုက်လာပြီး လစ်ဟာမှုကို ခံစားလာမည်။ နောက်ဆုံးတွင် လူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးကွာသွားပြီး သမ္မာတရားနှင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရန် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးသည် အထိ လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သစ္စာဖောက်ပြီး လောကသို့ ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စုဝေးပွဲ မှန်မှန် တက်ရောက်ပြီး ညီအစ်ကို မောင်နှမ များနှင့် အတူ သမ္မာတရားကို မိတ်သဟာယဖွဲ့ ရမည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားကို ပို၍ နားလည် လာနိုင်မည်။ သို့မဟုတ် ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးကွာသွားပြီး အဆုံး၌ စာတန်၏ ဝါးမြိုခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။
ဤ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးနောက် စုဝေးပွဲ၏ အရေးပါမှုကို သင်နားလည်သွားပြီဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤဆောင်းပါးသည် သင့်အတွက် အထောက်အကူပြုလျှင် အခြားသော လူများအား ပြန်လည် မျှဝေပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်သည်။ ၎င်းတို့အား စုဝေးပွဲ၏ အရေးပါးမှုကို သိနားလည် စေ၍ ယင်းကို တန်ဖိုးထားဖို့ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင့်ထံတွင် အခြားမရှင်းမလင်း ဖြစ်နေသော ပြဿနာများ ရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါ အွန်လိုင်း စကားပြောခန်းမှ တစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်၏ မေးခွန်းတို့ကို မည်သည့် အချိန်တွင် မဆို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည်။
ယနေ့မှာ ကပ်ဘေးများကျရောက်နေပြီ။မည်သို့လုပ်ဆောင်မှ သခင်တဖန်ပြန်ကြွလာခြင်းကို ကြိုဆိုရန် လက်မလွှတ်နိုင်မည်နည်း။
ကပ်ဘေးဒုက္ခကြီးသည် တဖြေးဖြေးနီးကပ်လာပြီ မည်သို့မှ ဘုရားသခင်၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကို ရနိုင်မည်နည်း
သမ္မာကျမ်းစာကို စွန့်ပစ်ခြင်းသည် မိစ္ဆာဒိဌိအယူကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသလား
လျူရီ၊ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဘေးဒုက္ခများနောက်ပိုင်းတွင်၊ ယခုအခါ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ သခင်၏ ပြန်ကြွလာခြင်း ရှေ့ပြေးနိမိတ်များကို အဓိကအားဖြင့် တွေ့မြင်ရပြ…
လတ်တလော အချိန်များတွင်၊ ငလျင်များ၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုများ၊ ကျိုင်းကောင်အုပ်ကြီးများ၊ မီးလောင်ခြင်းများ၊ ကပ်ရောဂါများ နှင့် အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းတို့ကဲ…
ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် သခင်ယေရှု၏ ပြန်ကြွလာခြင်းကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်ပြီး၊ ကယ်တင်ရှင်၏ ကြွလာခြင်းကို တောင့်တကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကြာမြင့်သေ…